Filohan’ny Antenimiera : “Sahirana ny firenentsika” | NewsMada
Filohan’ny Antenimiera : “Sahirana ny firenentsika”
“Tsy lavina, ao anaty fahasahiranana ny firenentsika. Temerin-doza roa na telo ny firenena noho ny tsy fandriampahalemana, ny loza voajanahary mateti-pitranga, ny aretina isan-karazany, ny olana samihafa… Sarotra ny taona 2015 nivalona iny”, hoy ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max, tamin’ny lanonana fifampiarahabana teny Iavoloha, omaly.
Koa ndeha hiarahantsika miatrika ny ho avy. Mba tena hipaka sy hiantraika any amin’ny isan-tokantranon’ny Malagasy tokoa ny ezaky ny fitondram-panjakana, araka ny vina efa nofaritan’ny filohan’ny Repoblika.
Miverina amin’ny laoniny izao ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenentsika sy ireo mpiara-miombona antoka any ivelany. Irariana ny firosoan’izy ireo amin’ny lalina kokoa hatrany amin’izany fiaraha-miasa izany.
Goavana ny vina sy ny fanamby amin’ny fampandrosoana. Anjarantsika ny miezaka, ka tsy ho very an-javony ny fiaraha-miasa amin’ny any ivelany. Mba tsy tena hisy vokany azo tsapain-tanana ho fanatsarana ny toe-piainan’ny vahoaka.
Takina ny fahaiza-mitantana; raha tsy izany, ho very sasaka ny ezaka. Efa misy ny tonga ary mbola maro ny ho avy momba ireo fiaraha-miasantsika amin’ny mpiara-miombon’antoka.
Tena ilaina ny fitondrana tsara tanana, ny ady amin’ny kolikoly…
Miankina amin’ny fahamarinan-toerana sy ny fitoniana izany. Mba hatevenina ny dingana vita tamin’ny fampihavanam-pirenena. Manantena ny vahoaka, faniriany ny hanana fihatsaram-piainana. “Mba hidina amin’izay ny menaka”, hoy izy.